Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးလက်ဝဲသို့ပြန်သွားရန် Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' ခြောက် Million Dollar Man ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအခြားအ OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့အမြန်နှုန်းနှင့်သေစေနိုင်သောလက်ဝဲခြေသည်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ Luke Shaw ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
လုကာရှင်ပေါလုပြုခဲ့ကို Shaw Thames, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအပေါ်သို့ Kingston အတွက်ဇူလိုင်လ 12 ၏ 1995th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
သူနဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမျှဝေ ဂျိမ်း Rodriguez, Brock Lesnar, မာလာလာဘာဘရာဘော့ (Noble Peace Prize ဆုရှင်), Sundar Pichai (ဂူးဂဲလ်၏ CEO) နှင့်ဘီလ် Cosby ။
လုကာသူ၏မိခင်, ဟန္နကို Shaw နှင့်ဖခင်သည်ပေါလုကို Shaw မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ Surrey မှာကြီးပြင်းသူ Hersham အတွက် Rydens လုပ်ငန်း School တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့အဘို့သူ၏မေတ္တာ Gianfranco လျက်ဇိုလာ ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပေါ်။ Little ကလုနေတဲ့ချယ်လ်ဆီးထောက်ခံသူအဖြစ်ကြီးပြင်းသူမူလကလန်ဒန်ကလပ်အဘို့ကစားစေချင်ကြောင်းအခိုင်အမာသိရသည်။ တကယ်တော့သူတစ်ဦးကရှစ်နှစ်အရွယ်အဖြစ်မိမိတို့၏အကယ်ဒမီသို့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Shaw Guildford အတွက်ချယ်လ်ဆီးရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစင်တာမှာကစားပေမယ့်တစ်ဦးအကယ်ဒမီရာအရပျကိုကမ်းလှမ်းမခံခဲ့ရပါဘူး။
အဆိုပါစိတ်ပျက်နေသော်လည်း, လုကာနေဆဲဘောလုံးအပေါ်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာမိမိအိပ်မက်လိုက်စားဆက်ပြောသည်။ 2001 ခုနှစ်တွင်သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုကြီးဘောလုံးအကယ်ဒမီအဘို့မိမိကိုမိမိတည်ဆောက်ဖို့လေလံအတွက် Molesey Junior သူ့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့သူ Hersham ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင်ဆောက်သမ်တန်သူ့ကိုဖုန်းခေါ်အပ်ပေးတော်မူ၏။ 11 နှစ်ပေါင်း (ထိုအကယ်ဒမီများအတွက် 2003-2011) အတွက်ကလပ်အဘို့ကစားပြီးနောက်, လုကာကလပ်ကဝယ်ယူစျေးအကြီးဆုံးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် 2014 အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, လုကာလက်မထပ်ရသေးသော်လည်းမိမိအချစ်ရာသခင်သည်ရည်းစား Shelby Billingham နဲ့ဆက်ဆံရေးအတော်ပင်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်ပျော်ရွှင်စွာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခံစားသည်။
Luke Shaw နှင့် Girlfriend, Shelby Billingham
လုကာနှင့် Shelby နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်မကြာမီသူလန်ဒန်ကနေမန်ချက်စတာမှပယ်ရှားပြောင်းရွေ့အဖြစ်နည်းလမ်းတွေနှံ့ပြား။ သူကရည်းစား Anouska ဆန်းတို့စနဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့သည့်အခါဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေကြီးထွားကြတယ်။
မကြာသေးမီကလက်ဝဲ-ကျောအချို့နှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်လုပ်နေတာပြောက်ခဲ့သည် ခရစ္စမတ် သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့စျေးဝယ်။ Shaw, ဆောင်းတွင်းရာသီဥတုအနေဖြင့်မိမိကိုမိမိကာကှယျတစ် woolly ဦးထုပ်နှင့်အတူအားလုံးအနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်။ နှစ်ဦးစလုံးကြီးတွေတစ်ရက်မတိုင်ခင်လက်ဆောင်များအတွက်ရတနာစတိုးဆိုင်ကြည့်ယူရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
Luke Shaw သူ့ရည်းစား, Anouska ဆန်းတို့နဲ့အတူရတနာစျေးဝယ်များအတွက်တတ်၏။
ဒါပေမယ့်သူတို့ကရတနာဆိုင်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်းအပိုင်း scouring သုံးစွဲအချိန်မှာတရားစီရငျ, သူတို့သိပ်ဝေးလံမဟုတ်အနာဂတ်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူးနေ့ရက်ကိုစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင် Luke Shaw နှင့်သူ၏ရည်းစား Anouska ဆန်းတို့စသည့် United4Unicef ​​ညစာ event မှာဖြစ်ပါတယ်။
Luke Shaw နှင့်သူ၏ချစ်မြတ်နိုးတဲ့, Anouska ဆန်းတို့စ
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
လုကာမွေးဖွား Thames ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပေါ်မှာ Kingston တစ်လူသိများတဲ့တစ်ကြိမ်လူလတ်တန်းစားမိသားစုသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားအဘို့ကိုချွတ်ပေးဆောင်ဘောလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုမီဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကသူ့မိဘမြား၏အနှစ်သက်ဆုံးကလေးသည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိချစ်ရာသခင်သည်မိသားစုထံမှမဟာမေတ္တာတော်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သညျလညျးမိမိအောင်မြင်မှုအဘို့သူ၏မိသားစုဂုဏျ။ အောက်တွင်မစ္စတာရှင်ပေါလုကို Shaw, Luke Shaw ပါဝင်သောခစျြဇနီးဟန္နကို Shaw (နောက်ကျောအမြင်) နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များသည်။
Luke Shaw မိသားစု
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Luke Shaw ညီအစ်ကိုနေ Vs မော်ရင်ဟို
Luke Shaw'S အစ်ကိုတစ်ချိန်ကသူစော်ကားခဲ့ကြသည်ထင်ရှားသည့်အတွက်အကြီးအကျယ်တွစ်တာ rant သွားငြင်းဆို ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို.
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ4- အထူးတစ်ခုမှာသူ့အဖွဲ့0ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်များအတွက်ကစားသမားများထဲကမိမိညီကိုကျဆင်းသွားပြီးနောက်ဘင်ကို Shaw ထင်ရသောဒေါသထွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
သူအလွဲသုံးစားလုပ်စတင်ခင်မှာ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုဘင်စပိုင်းတွင်ဟုဆိုလျက်, ကောင်းစွာကလပ်ဆန္ဒရှိအားထင်ရှား: "ကံကောင်းပါစေယနေ့မန်ယူ။ "
အဖွဲ့ကြေငြာခဲ့သည်နှင့်အကို Shaw ဘင်စွပ်စွဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အောက်ပါရေးသားခဲ့သည်အတူကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်အမှုအရာလျင်မြန်စွာအချဉ်လှည့်။
ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုနှင့်အတူ Benny ရဲ့စိတ်ပျက်
Luke Shaw အမြဲများ၏လက်ခံရရှိအဆုံးမှာသူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိရဖူး ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို မိမိအအသင်း၏ပယ်ကျဆင်းသွားခံရဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်သည့်ပေါကျကှဲခွငျး။ ဟိုဆေး မကြာခဏလူသိရှင်ကြားအကြီးတန်းယူနိုက်တက်ကစားသမားငယ်ရွယ်နောက်ခံလူနှစ်သိမ့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည့်အတိုင်းအတာအထိ Shaw ကဝေဖန်လိုက်သည်။
Luke Shaw နဲ့အတူဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုရဲ့စိတ်ပျက်
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ခြေထောက်လူငယ်များသို့ဗီဒီယို
Luke Shaw တစ်ချိန်က PSV ဆန့်ကျင်နေတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်နှစ်ဆခြေထောက်ချိုးတစ်ခုမသိမမြင်နိုင်သောနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရသည်။
Hector Moreno သည် PSV နောက်ခံလူ, ပေါ့ပေါ့ဆဆသူ့ကိုသို့ clattered အခါပွဲစဉ်သို့ 15 မိနစ်ထက်လျော့နည်းခြင်း, buccaneering လက်ဝဲ-ပြန်အတိုက်အခံပင်နယ်တီဧရိယာသို့အားသွင်းခဲ့ပါတယ်။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်
ဒန်နီရို့စကင်ဆာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
Luke Shaw ရဲ့အားသာချက်များ: မြင့်မား, စိတ်ကူးယဉ်သစ္စာစောင့်သိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စာနာခြင်းနှင့်ဖြားယောင်း, Tenacious ။
Luke Shaw ရဲ့အားနည်းချက်များ: , အဆိုးမြင်သံသယ, အသုံးချကစားနဲ့မလုံခြုံ Moody ။
အဘယ်အရာကို Luke Shaw likes: အနုပညာ, အိမ်မှာ-based ဝါသနာ, ချစ်ရသူ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးမုန့်ညက်ကူညီပေးနေ, ရေအနီးရှိသို့မဟုတ်လျှော့ပေါ့။
Luke Shaw နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: သူစိမ်း, မေမေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအပျေါထှနျးမဆိုဝေဖန်မှုများ။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နာမည်ပြောင်နောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်း
the Sun တစ်ချိန်ကသူတို့ Luke Shaw ယူနိုက်တက်ကစားသမားချစ်စနိုးကြပြီအစီရင်ခံတင်ပြ '' ခြောက် Million Dollar Man ". ဒါကသူ့ကိုသူ၏အာကာသယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အခါမှာအလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရတယ်တဲ့သူအာကာသယာဉ်မှူး Steve Austin နှင့်အတူအလားတူယုံကွညျခွငျးကြောင့်ဖြစ်သည်။
လုကာလည်း PSV Eindhoven ဆန့်ကျင်ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးထိတ်လန့်ခြေထောက်ချိုးခံစားခဲ့ရသည်။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တိုက်ခိုက်မှုစိတ်ကိုအဖြစ်မှန်
Luke Shaw အဓိကအားဂိမ်းမှအများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုစိတ်ချဉ်းကပ်နည်းယူခဲ့သူအပေါ်အခြေခံပြီးဟောင်းတဦးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက် left-ပြန်ပက်ထရစ်အီဗရာမှနှိုင်းယှဉ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အီဗရာအနေနဲ့တိုက်စစ် wingback အဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ဒါပေမဲ့စာရင်းဇယားကို Shaw သာ. ကောင်း၏အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အချက်အလက်နဲ့ Luke Shaw ကိုပိုမိုတိုက်ခိုက်စိတ်အီဗရာထက်ထင်ရှား
စာရင်းများအရနှင့်ဘောလုံးနှင့်အတူ dribble ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါတစ်ဦး 141% အောင်မြင်မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ် - အီဗရာစီမံခန့်ခွဲထက်ပို - သည်ကလေးငယ်များအတွက် 35 56 ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ၌သူ၏အသင်းဖော်မှဖြတ်သန်းသွားသည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပေါလ်စခိုးမမင်္ဂလာ
Shaw ကရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သဘောကျနေဆဲမဟုတ်ရှိပါတယ်တယောက်သောသူပေါလ်စခိုးသည်။ အဆိုပါဒဏ္ဍာရီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ကစားသမားအဆက်မပြတ်ရှိပါတယ် ထွက် hit စျေးနှုန်း tag ကိုကျော်သူ့ယခင်ကလပ်နောက်ခံလူများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်သရဲနီတို့အစားတိုက်စစ်မှူးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသင့်ပါတယ်ပြောဆိုထားသည်။ တစ်ဦးပြောင် 718 နှစ်အရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ယူနိုက်တက်အဘို့အ 20 စုစုပေါင်းပွဲဖန်ဆင်းတော်မူသောပေါလ်စခိုး, မကြာသေးမီက Shaw အပေါ်ထွက်ဖြာသန်း + ပု£ 30 ခံခဲ့ရသည်ဟုအဖြစ်ကိုးကားထားသည် "ရီစရာ" ။
Luke Shaw ၏ပေါလ်စခိုးမရရှိခြင်း၏
သူ၏စကားအတွက် ..."တစ်ဦးဘယ်ဖက်-ပြန်£ 34 သန်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်သည်ဂိမ်းသွားပြီဘယ်လောက်မိုက်ပြသထားတယ်။ အဲဒီအတွက် ပိုက်ဆံငါ "သူ 30 ရည်မှန်းချက်များတစ်ရာသီဂိုးသွင်းသွားမယ့်အလယ်ဗဟို-ရှေ့ဆက်ချင်တယ်
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိမိအအဆိုးဆုံးပြိုင်ဘက်
Luke Shaw အရှိဆုံးကွောပြိုင်ဘက်အချို့ကိုစစ်ချီလာခဲ့ပါသည်။ ၏အကြိုက် ဧဒင်ဥယျာဉ်ဇက်, ဒံယလေကစတားရစ်ခ်ျ နှင့် Wilfried Zaha, ဆွာရက်ဇ် အားလုံးစတုရန်းတက်။
သို့သော်သူ၏အများဆုံးကိုကွောကျရှံ့ပြိုင်ဘက်သောသူဖြစ်သနည်း ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကိုက်လူသိများဘယ်သူမျှမက, မဆွာရက်ဇ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဗစ်တာမောရှေသည်။ မကြာသေးခင်ကအတွက်မေးတဲ့အခါ တွစ်တာ Q & A အဘယ်သူသည်အများဆုံးကိုကွောကျရှံ့ပြိုင်ဘက်, ထိုလူငယ်ဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, replied ခဲ့သည်:
"ဒါဟာခက်ခဲတဲ့တဦးတည်းရဲ့ဒါပေမယ့်ငါသွားမယ် ဗစ်တာမောရှေသည်, သက်သက်သာသည်သူ၏အရှိန်အဟုန်နှင့်အာဏာသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကအလွန်ခက်ခဲစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
Luke Shaw ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဆယ်ကျော်သက်မြျှောလငျ့
£ 100,000-a-အပတ်ကကစားသမားများနှင့်ပရိသတ်များရောနှော Luke Shaw ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိသောမော်တော်ကားမောင်းနှင်ကြည့်ဖို့ကိုမျှော်လင့်မနေသင့်န်းကျင်၏လုပ်ခအတွက်ဆွဲ, ကမ္ဘာ့စတုတ္ထအများဆုံးအကုန်အကျအများဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း။
သူတဦးတည်းမတတ်နိုင်သောကြောင့်, မင့် - ယူနိုက်တက်မှာမိမိဝင်ငွေရရှိမှုသူ့ကိုကမ္ဘာ့အများဆုံးငြူစူခြင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏တဦးတည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူကသေးသညျမိမိမောင်းနှင်မှုစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးမရှိသေးပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသင် Shaw ကထိုအခြိနျမှာဖွင့်ပုံကိုနုပျိုသတိရဤကဲ့သို့သောအချိန်လေးပါပဲ။
သူဟာယူနိုက်တက်ပူးပေါင်းလာသောအခါမှသာ 18 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကပူးပေါင်းမီ, သူနေဆဲသူ့မိဘနှင့်အတူနေထိုင်နေခဲ့ပါသည်။ သူ့မိဘမကြာခဏသူ့ကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ပွဲစဉ်ကစားရန်မောင်းတယ်။ ဤသည်ကိုသူ 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားသွားမီကပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအ 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားကတိကဝတ်ကျော်ခဲ့ကြပြီးနောက် Shaw ကတစ်ပါတ်ကြာ, အထူးကြပ်မတ်မောင်းနှင်မှုသင်တန်းကိုယူ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့သည်သူ၏လိုင်စင်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးစူပါကြွယ်ဝသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေသူ့အကူးအပြောင်းအမှန်ပင်အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒန်နီရို့စရဲ့ငယ်ဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - 26ပြီ ၂၄ ရက်၊
ပတေရုသ Crouch ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Todd Cantwell ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိုးဂိုမက်ဇကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်